Hibernation muGnu / Linux | Linux Vakapindwa muropa
Hibernation muGnu / Linux
Vazhinji venyu muchandiudza kuti hibernation tekinoroji hachisi chinhu chitsva, asi chiri kuve musimboti wezvinyorwa zvakawanda uye zvinyorwa nekuda kwematambudziko achangoburwa ayo ehurongwa hwekudyidzana nekuparadzirwa pamwe nevashandisi vari kuve nazvo munguva pfupi yapfuura nehusiku.
Pano hatichataura nezve matambudziko anayo Windows 10 ine hibernation, asi isu tichataura nezvechishandiso ichi mukuparadzira kukuru kweGnu / Linux, pamwe nekusiyana kwayo maererano nedzimwe nzira dzekuvhara kana kumisa komputa uye nekudaro kuziva inova sarudzo yakanakisa yatinayo pamamiriro ese ezvinhu.
Hatisi kuzotaura zvese zvakagoverwa zviripo kune wese munhu, asi isu tichataura nezvazvo hibernation pane yakakura Gnu / Linux kugoverwa izvo zviripo izvozvi.
Kutanga isu tinofanirwa kuziva kuti hibernation chii uye chii chisiri. Hibernation iri maitiro ehurongwa hwekushandisa umo data rese, masevhisi uye marongero atiri kushandisa "akaomeswa" kuti tivhare komputa uye uchitange zvakare sezvazvaive.
Nekudaro, hibernation hazvireve kusiya magwaro uye mafaera sezvaaive patakadzima komputa kuti tishandise zvakare, uye hazvireve kumisa komputa. Inenge ichikurumidza kupfuura yekare uye isingadhuri pane iyo yekupedzisira.
1 Kumisa chii?
2 Chii chinonzi restart nemagwaro akavhurwa?
3 Saka chii chinonzi hibernation?
4 Ndinogona here kuita hibernate basa mune gnu / linux?
5 Ndinoita sei kuti ndibate hibernation pane yangu Gnu / Linux kugovera?
6 Maitiro ekugonesa hibernation muUbuntu
7 Mhedziso pane hibernation
Misa timu kana pinda mune yekurara modhi zvinoreva kuti iyo inoshanda sisitimu inogadzira mhenyu mufananidzo weese system (data rako pachako rakabatanidzwa) ndokutumira kugondohwe kana ndangariro isina kugadzikana yekombuta kuitira kudzima zvimwe zvese zvinoriumba, asi gondobwe ndangariro nebhodhi reamai rinoramba richishanda kunyangwe richinonoka.
Kuenda kunorara zvinoreva kuti michina inoramba ichidya simba, kunyangwe iri pasi pekushanda zvizere uye ichizogadzirwazve nekiyi kana chiratidzo chegonzo kana nekungosimudza muvharo mune zvemalaptop.
Iyi nzira inobatsira chaizvo mumakomputa ane anopfuura 2 Gb yegondohwe ndangariro uye zvishoma zvemukati zvekuchengetedza pane rakaomarara diski (semuenzaniso, nekuti iri SSD diski).
Chii chinonzi restart nemagwaro akavhurwa?
Mashandiro anoita seMacOS ane musanganiswa webasa uyo Iyo inofungidzira kuvhara iyo inoshanda sisitimu asi kana yadzoswazve kumashure, iyo inoshanda sisitimu inovhura izvo zvazvino zvinoshandiswa izvo zvakavharwa kana mamwe magwaro.
Izvi zvinoshanda kune vazhinji, saka zvakawandisa zveGnu / Linux zvinoita zvakafanana. Nekudaro, iyi sarudzo ichiri yekutanga kana kudzima kuri nyore kwekombuta, iine kutanga kwekutanga kurodha kwemaitiro uye kumisikidza kunoitwa pakutanga kwega kwega, chimwe chinhu chatinogona kuita nemaoko asi chinogona kudzora kutanga kweiyo inoshanda sisitimu.
Saka chii chinonzi hibernation?
Hibernation maitiro ayo mufananidzo mupenyu weiyo yazvino system inogadzirwa, asi haina kuchengetwa mumakondohwe ndangariro asi mukuchinjanisa ndangariro kana hard disk swap memory. Ndokunge, pane diski uye nekudaro inogona kudzimwa pasina kudzima ruzivo.
Izvi zvinoreva kuti komputa inogona kudzimwa nekuti haina chinhu mundangariro yegondohwe, ndangariro isina kugadzikana, asi iyo system yekuremerwa haina kureba sekutanga kweiyo inoshanda system, sezvo mufananidzo uchishandiswa.
Ruzivo rwese rweiyo system rwakakandirwa mune imwechete faira iri iro faira rakatakurwa, saka futi isu tichafanirwa kuve neakakura anokwanisa hard drive kuti tikwanise kushandisa hibernation pasina dambudziko.
Ndinogona here kuita hibernate basa mune gnu / linux?
Tinogona chete kuve nebasa iri kana iyo Linux kernel ichinyatso kuitsigira. Izvi zvakakosha kuti tirangarire nekuti kana tichida kushandisa kernel rakanyorwa nesu tinofanirwa kuita kuti basa iri riitwe, zvikasadaro tichapera basa iri uye hatizokwanise kumisa hibernation.
Nekudaro, chinonyanya kujairika kushandisa kernel inopihwa nekuparadzirwa, vhezheni iyo iyo hibernate inoshanda pamwe nemamwe mabasa uye madhiraivha anogoneswa. Saka chinhu chakajairika ndechekuti hibernation inowanikwa mukomputa yedu neGnu / Linux.
Ndinoita sei kuti ndibate hibernation pane yangu Gnu / Linux kugovera?
Sezvatakambotaura, hibernation iriko mune yese Gnu / Linux migove (zvirinani zvakanyanya). Izvi zvinoreva kuti chete enda kumenyu yekudzima pane desktop yedu uye isu tichawana sarudzo yeku hibernate, pamwe nekuvhara, kutangazve, kumbomira uye kutema kunze. Kana tangove mune hibernation mode, isu tinongofanirwa kudzvanya bhatani remagetsi kuita iyo system zvakare.
Kana isu tichida kushandisa iri basa kuburikidza neyekupedzisira rairo, chekutanga tinofanirwa kuve neayo pm-utils maturusi akaiswa, chimwe chinhu icho chinenge chatove. Asi kana paine chero mameseji ekukanganisa, isu tingave tisina maturusi aya akaiswa, ayo anowanikwa mune ese epamutemo ekuparadzira zvinyorwa Nekudaro, kana isu tiine maturusi aya, kuti tinyore hibernation mode isu tinofanirwa kushandisa unotevera kuraira:
Kana isu tine mugove uyo wakavakirwa muArchLinux kana kutora kubva pairi, isu tinongofanirwa kunyora zvinotevera:
Mune kesi yekushandisa OpenSUSE, isu tinofanirwa kushandisa unotevera kuraira:
Kana isu tine njodzi zvakanyanya uye isu tine kugovera kunoenderana kana kuri Gentoo, iwo murairo unotevera:
Uyu ndiwo mutemo wezvese, asi kune zvimwe zvisarudzika zvakaita seUbuntu.
Maitiro ekugonesa hibernation muUbuntu
Kunyangwe Ubuntu ichibvumidza iyo sisitimu kuti iende kune hibernation mune yayo kernel, iyi sarudzo haina kubvumidzwa nekutadza mukugovera uye isu tinofanirwa kuzvimisikidza isu pachedu. Asi izvi inogona kugadziriswa nenzira iri nyore kwazvo.
Kutanga isu tinofanirwa kugadzira iyo faira faira ine gedit uye tinyore zvinotevera mairi:
Isu tichachengeta iyi faira iine zita rinotevera:
Iye zvino tinofanirwa kuvhura yedu maneja maneja nemvumo yemutungamiri uye nekuisa iyo faira ratakasika mufaira rinotevera:
Kana tangonamira iyo faira, tinopfiga windows ese uye titangise iyo inoshanda system kuitira kuti shanduko dzakakodzera dzishandiswe. Uye mushure mekutanga system, isu tichaona kuti sarudzo yeiri basa sei yave kuwanikwa mumamenyu edesktop eUbuntu hwedu uye kwete chete kuburikidza neiyo terminal.
Mhedziso pane hibernation
Hibernate kazhinji ine hushamwari mune zvakatipoteredza pane kurara, asi tinofanira kufunga zvatinoda. Kana isu tichida kutanga nekukurumidza, kumiswa ndiyo inokurumidza sarudzo yeavo vese.
Kana, kune rumwe rutivi, isu tichida kuchengetedza simba uye zviwanikwa, kutangazve nemavhura magwaro ndiyo yakanyanya kunaka sarudzo. Asi kana, pane kudaro, isu tisina matambudziko nezviwanikwa asi isu tisingade kutambisa simba, hibernation ndiyo yakanyanya kunaka sarudzo uye saka kazhinji inowanzo kuve yakanakira zvigadzirwa zvemazuva ano uko pasina miganho pane yakaoma dhiraivhu nzvimbo asi kune matambudziko ebhatiri.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » GNU/Linux » Sisitimu Yekutonga » Hibernation muGnu / Linux
Saka nekukasira chinyorwa / hurukuro inouya mupfungwa, ini handirangariri kwandakamboiverenga, imomo kwayakanzi kuchinjana hakuchisina basa kana tine zvinopfuura 8GB zvegondohwe. Asi kana isu tichifunga nezve sarudzo senge hibernation, kunyangwe hazvo gondohwe riinaro, hapasisina mhino pane kuve nekuchinjana kupatsanura hongu kana hongu, uyezve chikonzero nei zvichikurudzirwa kuti saizi yayo ive, zvirinani, iyo yegondohwe ndangariro.
Ndinoziva ndiri kupindura kune yakataurwa kubva makore maviri apfuura, asi imhaka yekuti hapana akataura mune zvakataurwa kana muchinyorwa, kuti iyo faira panochengeterwa hibernation uye swap zvinhu zvakasiyana zvisina hukama, kunyangwe zviine kufanana . Yakakwana swap-yemahara uye hibernation haina kukanganiswa.
Uye hongu, chinjana mune zvinoitika mushandisi haisisina musoro (pamwe neyakagara kusarudzika kweasina kujairika). Shanduko iyi yaishoreka kana sisitimu yapera yegondohwe remahara. Ndine 4GB yegondohwe uye kashoma kupfuura 1,5GB. Saka mune yangu haina musoro. Imwe ingave iri nyaya kana ini ndaigara ndiri padanho rekubuda kunze kwegondohwe remahara. Nemuenzaniso uyu, munhu wese anokwanisa kutoziva kana vachida kuchinjanisa kana kwete.
Chinyorwa ichi chakanaka, chakazara uye chakatsanangurwa zvakaringana, asi -ndinokumbira- chenjerera kuperetera zvikanganiso. Chinyorwa hachichabatsiri kana icho "chii" chausingazive iwo mubvunzo kana mubatanidzwa, semuenzaniso.
Chinyorwa chakanaka. Ndatenda.
chinyorwa chakanaka uye chinobatsira
bhuku rakanaka kwazvo uye rinobatsira
Maitiro ekuronga imwe nguva yeku hibernate otomatiki? Kuronga kudzimisa kwakarongwa, semuenzaniso na 23:00, inenge iri shutdown -h 23:05, asi
Zvingave sei kuronga hibernation?
Linux akapindwa muropa akadaro
Wakaedza na pm-hibernate -h 23:05
Pindura kuLinux akapindwa muropa
Omar Beltran akadaro
Zvakanaka, ini ndine Ubuntu 20.04 uye ini ndiri mutsva kune ino nyika, ini ndaida kugonesa hibernation muchirongwa uye ini ndakatevera nhanho dzese sezvakaratidzwa muchinyorwa asi hazvina kundishandira. :(
Pindura kuna Omar Beltrán
Yakanaka chinyorwa, ndakagadzirisa dambudziko iro iyo pc yakadzima zvachose payakashaya mari. Asi sezvo ini ndakaita nzira yakaratidzirwa, painosvika panonetsa nyika bhatiri rinopinda muhope. Uye zvakare, ini ndinogonesa iyo hibernate basa zvese pane bhatani rekubvisa uye kana ndichivhara muvharo. Ndatenda.
Pindura kuna Federman Moreno
Mozilla inotenga homwe kuti iise mukati mayo zvigadzirwa